Hagaha qoyska ee ku laabashada ardayda si amni ah waxbarashada shaqsi ahaaneed - MPS_CMF
Ku noqoshada waxbarashada caadiga ah ee fasalada Shaqsi ahaan.
Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ayaa leh qorshe caafimaad iyo badbaado oo la diyaariyo si ardayda loogu soo dhoweeyo. Dugsiyadeenna Dadweynaha ee Minneapolis waxay leeyihiin qorshe caafimaad iyo amni oo jira si ardayda loogu soo dhoweeyo dhismayaasha dugsigeenna markay ammaan tahay in la siiyo wax-barasho shaqsi ahaaneed. Hagahan wuxuu qoysaska siinayaa dulmar guud oo ku saabsan habdhaqanno badbaado. Su'aalo dheeraad ah oo badanaa la isweydiiyo ayaa sidoo kale laga heli karaa websaydka Ku Laabashada Waxbarashada Shaqsi ahaaneed.
Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis (MPS) iyo iskuulkaagu waxay qoysaska ogeysiin doonaan goorta iyo haddii waxbarashada shaqsi ahaaneed bilaabmi doonto. Waxaannu sidoo kale ku siin doonnaa waqti aad ku qorsheyso kala-wareegan.
Borotokoollada caafimaadka iyo badbaadadaee MPS waxaa haga Qorshaha Waxbarashada ee 2020-21. eeGobolkaMinnesota. Go'aanka ah in la bixiyo wax-barasho shaqsi ahaaneed ee waqti buuxa waxay ku saleysnaan doontaa dhowr arrimood: Waaxda Waxbarashada ee Minnesota, heerarka caabuqa ee COVID-19 awoodda shaqaalaha, diyaarsanaanta dhismaha, helitaanka qalabka ilaalinta shakhsiyeed, iyo doorbidka qoysaska. Maaddaama arrimahan ay isbeddelayaan, marka go'aanka nooca waxbarashada shaqsi ahaaneed way sii socon doontaa ama haddii aynu ku laabanno waxbarashada masaafada fog ee waqtiga buuxa.
Waxbarashada shaqsiga qof ahaaneed ee ardayda dugsiga hoose,shuruudaha kala fogeynta bulshada ayaa loo dabcay carruurta; si kastaba ha noqotee, tallaabooyinka amniga ayaa wali la qaadayaa sida xirashada wejiga daboolka iyo jeermiska dusha iyo meelaha.
*Ku Daboolida wajiga maaskaraha: Haddii ardaygaagu uusan xiran karin maaskaraha weji daboola xaalad caafimaad awgeed, ama xaalad dabeecad awgood; la xiriir xafiiska caafimaadka iskuulkaaga si aad u hesho tilmaan hagitaan ah — ardaydu waxay u baahan doonaan warqad dhakhtar si looga dhaafo maaskaraha xiritaanka wejiga. Dhammaan ardayda, shaqaalaha iyo dadka kale ee ku sugan dhismayaasha dugsiga, iyo xafiisyada degmada ama raaca gaadiidka dugsiga waxaa looga baahan yahay inay xirtaan maaskaraha wejiga.
1. Imaanshaha iyo ka tagida dugsiga
Shaqaaluhu waxay ka caawin doonaan ardayda gudaha iyo dibedda dhismaha si loo hubiyo in la sii wado kala fogaanshaha bulshada.
Qalabka wax lagu nadiifiyo oo gacmaha lagu nadiifiyo ayaa laga heli karaa dhammaan meelaha laga soo galo ama laga baxo.
Waraaqaha sagxadda dhulka ayaa tusin doona ardayda sida loo ilaaliyo kala fogaanshaha bulshada ee khadadka, musqulaha, xafiisyada iyo meelaha kale.
Qoysaska iyo daryeelayaasha ka taga ama soo kaxeeya caruurtooda waxay u baahan doonaan inay ku sameeyaan sidaas irridooyin gaar ah. Shaqaaluhu waxay markaa kadib u galbinayaan ardayda fasallada ay ka yimaadeen ama uga soo noqonayaan.
Ardayda ku yimaada baska dugsiga waxay gelayaan irrid gooni ah oo ka timaada dhibcaha ama ka soo qaadista qoyska.
2. Baska rarida iyo dejinta
Baska fadhiga waxaa loo diyaarin doonaa banaan baaxad weyn oo suurtogalka ah oo u dhexeysa wadayaasha.
Dhammaan wadayaasha waxaa looga baahan doonaa inay xirtaan weji daboolan inta ay baska saaran yihiin.
Kuraasta waxaa la buuxin doonaa laga bilaabo dhabarka baska; walaalo wada fadhiisan doonaan.
Ardayda ayaa baska midba mar uga dejin doona hore iyo gadaal. Markay ku noqonayaan guriga, ardaydu waxay midba mar u dejinayaan joogsiga kasta.
Raadinta la xiriirida, xaadiritaanka maalin kasta waxaa qaadi doona wadaha baska maadaama arday walba baska soo galayo. Jaantus fadhiga ayaa loo isticmaali doonaa si loo ogaado halka ay ardaydu fadhiyaan si haddii ardaygu mar dambe u bukoodo COVID-19, waxay ka caawin doontaa in la aqoonsado cidda ay la soo xiriireen.
3. Xafiiska ugu weyn
Qaybiyeyaasha Plexiglass waxaa lagu meeleyn doonaa meelaha taraafikada badan sida xafiiska weyn.
Aagga sugitaanka ee weyn, kuraasta waxaa loo kala dhexaysiin doonaa 6 fuudh.
Fasallada waxaa loo qaabeyn doonaa inay ilaaliyaan kala fogaanshaha bulshada inta ugu macquulsan iyada oo ujeedadu tahay in lagu ilaaliyo 3 fuudh carruurta. Lix cagood oo kala fogeynta bulshada ah ayaa lagu ilaalin doonaa shaqaalaha iyo ardayda oo leh dhextaalka miiska caagga ah ee la siiyo mid ama hal koox loo baahan yahay in wax lagu baro waa hadii 6 fiit aan lagu hayn karin.
Fasallada waxay yeelan doonaan gacmo nadiifiyeyaal ah iyo nadiifiyeyaal lagu nadiifiyo. Nadaafada ayaa lagu keydin doonaa meel fog oo aan la arkin carruurta ka yar lix sano.
Qalabka waxbarasho ee la wadaago iyo qalabka waxaa ka nadiifin doona shaqaalaha inta u dhaxeysa isticmaalka.
Alaabada aan la nadiifin karin lana nadiifin karin ayay shaqaalaha ka qaadi doonaan. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah buugaagta dharka, buugaagta waraaqaha, ciyaaraha, agabka farshaxanka iyo qalabka kale ee waxbarashada.
Meelaha taabashada sare leh sida kuraasta, miisaska iyo albaabada waxaa fayadhawli kara maalinta oo dhan shaqaalaha fasalka iyo habeen kasta ilaaliyayaasha.
Dhammaan fasallada waxaa si buuxda uga nadiifin doona shaqaalaha ilaaliya dhammaadka maalinta dugsiga marka qolalku madhan yihiin.
5. Xarumo ujeedooyin badan/ warbaahin ah
Qalabka waxbarashada iyo qalabka la wadaago waa in la xadidaa.
Meelaha taabashada sare waxaa nadiifin doona jeermisna ka tirtiri doona shaqaalaha maalintii oo dhan.
Si loo xaddido dhaqdhaqaaqa ardayga ee qolka, qolka, qalliinka loogu talagalay khubarada / xulashooyinka waa in lagu qaataa fasallada dhexdooda markii ay suurogal tahay.
6. Wadooyinka waaweyn iyo jaranjarooyinka
Calaamadaha ayaa lagu dhejin doonaa darbiyada iyo sagxadda dhulka si ay uga caawiyaan xakameynta socodka taraafikada ee hoolalka iyo jaranjarooyinka.
Istiikaarada sagxadaha ayaa calaamadeyn doona dhibco kala fogeynta bulshada.
Kaliya kalabar tirada ardayda ayaa loo oggolaan doonaa musqusha ee kaladuwan xilli kasta. Shaqaaluhu waxay kormeeri doonaan tirada ardayda isticmaasha musqusha.
Musqusha hal-isticmaal, calaamado ayaa loo dhejin doonaa si ardayda loo xasuusiyo in hal qof oo keliya uu isticmaalo musqusha waqti kasta.
Meelaha taabashada sare waxaa nadiifin doona jeermisna ka tirtiri doona shaqaalaha maalintii oo dhan. Dhammaan musqulaha ayaa si buuxda loo nadiifin doonaa dhammaadka maalinta dugsiga.
8. Nasashada iyo garoomada ciyaarta
Goobaha ciyaarta iyo goobaha waxqabadka ayaa furan.
Tirada ardayda ku jirta garoonka ciyaarta waqti kasta waxay ku koobnaan doonaan
Ardayda waxay u aadi doonaan banaanka fasaxa iyaga oo ilaalinaya kala fogaanshaha bulshada markay baxayaan oo ay soo galayaan dhismaha. inay xirtaan wejiga xijaabka. Iyo inta ay joogaan goobta ciyaarta
Albaabada albaabku waxay heli doonaan gacmo nadiifiye oo ay heli karaan ardayda iyo shaqaaluhu si ay u isticmaalaan marka ay dib ugu soo noqdaan dhismaha.
Qalabka ciyaarta ayaa la nadiifin doonaa oo la nadiifin doonaa maalin kasta.
Qalabka garoomada lagu ciyaaro ayaa la xiri doonaa marka heerkulka bannaanka uu ka hooseeyo 32 digrii Fahrenheit maaddaama jeermis dileyaasha aysan waxtar ka hooseyn qabowga.
9. Cunto iyo cunto fudud
Cuntooyinka ayaa horay loo sii baakadeyn doonaa si shaqsi ah loo isticmaalo.
Quraacdu waa la-qabsan doonaa oo lagu cuni doonaa fasalka dhexdiisa.
Qadada waxaa qaadan doona ardayda makhaayadda wax ku cuna oo makhaayadda ama fasalka dhexdiisa ayaa lagu cuni doonaa. si loo hubiyo in kala fogaanshaha bulshada la raaco.
Ardayda dhigata Fogaanta Wax barashada, sanduuqyada cunnada ayaa loo heli karaa ardyda dugsiga hoose.
Cunto fudud barnaamijyada dugsiga kadib ayaa lagu dhex cuni doonaa fasalka. * Mashiinnada iibinta waa la deminayaa.
10. Ilaha biyaha
Ilaha biyaha waa la duudduubi doonaa oo lama heli karo si loo isticmaalo.
Dhalada biyaha oo buuxda ayaa laga heli doonaa dhamaan iskuulada. Ardayda waa in lagu dhiiri galiyaa inay ka soo qaataan dhalada biyaha u gaarka ah guriga isla markaana lagu qoro magacooda.
11. Hawada iyo socodka hawada
Meesha ay suurta gasho, miirayaasha hawada ayaa kor loogu qaadayaa heerka ugu sareeya ee suurtogalka ah (MERV 11 - 14 filtarrada). Cutubyada sifeynta HEPA ayaa la dhigi doonaa fasallada halkaasoo nidaamyada hawo-qaadashada aysan taageeri karin miirayaasha MERV.
Si loo keeno nidaamyo hawada neecaawda banaanka ka baxsan waxay bilaaban doontaa laba saacadood ka hor inta uusan iskuulku bilaaban waxayna sii socon doontaa laba saacadood ka dib marka iskuulka la xiro.
12. Karantiilka shaqsiyaadka jiran
Meel gaar ah oo u dhow xafiiska kalkaalisada ayaa loo qoondeyn doonaa arday kasta oo bilaaba inuu muujiyo astaamaha COVID-19. ayaa si cad loo calaamadeyn doonaa oo qulqulka marawaxadaha hawada ee qolkan ilaa qolalka kale waa la ilaalin doonaa. oo leh miirayaal dheeri ah oo HEPA ah.
Ardayga waa laga sooci doonaa dadka kale ilaa ay ka soo qaadaan waalid ama ilaaliye. Gadiid ayaa la siin doonaa arday kasta oo waalidkiis / mas'uulku uusan ku qaadi karin waqti macquul ah.
Cunuggu waa inuusan aadin iskuulka, xanaanada ciyaalka, ama barnaamijyada dhalinyarada haddii xaaladahaan ay ku sugan yihiin ilmaha:
Hadii ardayga laga helay cudurka COVID-19.
Ama laga helo calaamadaha cudurka COVID-19.
Ama uu hoiray ugu dhacay cudurka COVID-19.
Ama Inuu ardaygu sugaayo in laga baaro cudurka, ama sugaayo natiijooyinka baaritaanka COVID-19, ama waxay la nooshahay qof kasta oo astaamo leh oo laga baarayo COVID-19.
Ka hor intaanay ardaydu imaan dugsiga maalin kasta, qoysasku waa inay hubiyaan haddii ardaygoodu inuusan xanuunsaneyn. Haddii ardaygaagu la kulmayo mid ka mid ah astaamaha hoos ku taxan, fadlan ku haay ardayga guriga oo xusuusnow inaad wacdo dugsigaaga si aad uga warbixiso maqnaanshaha ardaygaaga.